CNC Mindi magaabay
biyaha mashiinka goynta jet
Qiimaha Our way isbadali ku xiran qaabeynta mashiinka iyo qeybinayay factor suuqa. Waxaan kuu soo diri doonaa liiska qiimaha updated dib markii uu xaqiijiyay qaabeynta mashiinka adiga kugu haboon iyo oraahda waa ansax ah in hal bil.
Waxaad samayn kartaa lacag bixinta waa in lala xisaabtama our bangiga, Western Union ama PayPal: sales@omni-cnc.com.
CNC router-buuxa 12 bilood dib u damaanad salka ku saarayaasha CNC oo khuseeya damaanad router on xisbiga 3rd dar ons. Wuxuu daboolaa qaybo korontada iyo farsamo hoos qoran 'isticmaalka caadiga ah'.
Laser Machine-buuxa ah inay damaanad saldhig on mishiinka laser iyo saarayaasha khuseeya warrty on xisbiga 3rd dar kuwa marka laga reebo qaybo ka mid consumable 12 bilood dib. Damaanad for tube laser RECI brand: 6 bilood, Lens & Mirror: 3 bilood.
CNC Plasma Machine-buuxa ah 12 bilood dib u damaanad saldhig oo khuseeya manufactures warraty on xisbiga 3rd dar kuwa marka laga reebo qaybo ka mid consumable. Sida: biiyaha, koronto, ilaalinta cap iwm
kharashka maraakiibta waxay ku xiran tahay sida aad doorato in aad hesho alaabta. Express sida caadiga ah waa ugu dhaqsaha badan, laakiin sidoo kale habka ugu qaalisan, oo kaliya ku haboon laser ah mini ama router. By seafreight waa xalka ugu fiican mashiinka router CNC ama laser, mashiinka plasma. Sida saxda ah heerka xamuulka annagu waxaan uun nahay soo qaadan karaa dib markii uu xaqiijiyay model mashiinka, iyo quote frieignt this sidoo kale waxaa uun sax ah in hal bil.
Cinwaankaaga: 6-50-501 Advanced Business Center, Tianqiao, Jinan, Shandong
© Copyright - 2009 - 2018: Dhammaan Reserved Rights.